> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi Insignia camcorder Video Iweghachite
Olee otú Naghachi ehichapụ Video si Insignia camcorder?
Ndewo, m na dị nnọọ na mberede ehichapụ ụfọdụ footage m nwa amụrụ ọhụrụ nwa m Insignia camcorder. -Adị m ka na-akwa ụta ugbu a. M na-atụsi-arịọ maka enyemaka iji naghachi ehichapụ video si Insignia camcorder ugbu a. Nwere ike o nyere m aka biko? Ezi echiche!
Ọ bụrụ na ị chọrọ o naghachi video si Insignia camcorder, a ndu niile bụ ihe dị gị mkpa. N'ezie, videos ehichapụ gị Insignia camcorder ka bụ na gị na camcorder ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa. Ha ga-okụrede na-adịgide adịgide mgbe ha na-overwritten site ọhụrụ data. Ya mere, ị nwere ike kwụsị iji gị Insignia camcorder ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa ozugbo na anya n'ihi na ihe Insignia camcorder video mgbake omume na internet maka enyemaka.
I nwere ike iri Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac dị ka a na-agbalị. Nke a pụrụ ịdabere na ngwa na-enye gị ka ị na-agbake furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ ọbụna rụrụ arụ videos si gị Insignia camcorder n'ime 3 mfe arụmọrụ. E wezụga, ị nwekwara ike naghachi furu efu foto na ụdị faịlụ ndị ọzọ si gị Insignia camcorder na nke a ngwá ọrụ dị ike kwa.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery na-amalite Insignia camcorder video mgbake ugbu a!
Usoro Insignia camcorder Video Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Biko eme ka n'aka gị Insignia camcorder ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa nwere ike ọma ejikọrọ na kọmputa gị. Ebe ọ bụ na ma nsụgharị nke Wondershare Data Recovery nwere yiri mgbake arụmọrụ, Aga m egosi gị otú naghachi ehichapụ video si Insignia camcorder na Windows version nke ya.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake usoro na-amalite Insignia camcorder video mgbake
Mgbe wụnye na launching Wondershare Data Recovery na kọmputa gị, ị ga-enweta ihe interface dị ka oyiyi n'okpuru.
Naghachi ehichapụ video si Insignia camcorder, biko họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode na-amalite.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Insignia camcorder ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa
Mgbe ahụ usoro ihe omume ga na-akpaghị aka ịchọpụta na-egosi niile draịva na kọmputa gị. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu maka gị Insignia camcorder na pịa "Malite" ka usoro ihe omume mmalite scanning maka furu efu videos na ya.
Nzọụkwụ 3 Naghachi video si Insignia camcorder
Mgbe scanning, niile hụrụ faịlụ gị Insignia camcorder ga-egosipụta na window. Ị nwere ike ele mbụ video aha ego olee otú ọtụtụ n'ime ehichapụ videos nwere ike natara site gị Insignia camcorder.
Na njedebe, gị na mkpa iji akara videos gị mkpa ma pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Iji zere data overwritten, biko adịghị na-Natara videos azụ gị Insignia camcorder ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa ozugbo mgbe mgbake.
SanDisk Flash Drive Iweghachite: 3 Nzọụkwụ naghachi Data si Sandisk Flash Drive